Nagarik News - ह्याट्रिक गर्ने नवयुग श्रेष्ठ को हुन्?
ह्याट्रिक गर्ने नवयुग श्रेष्ठ को हुन्?
19 Jan 2016 | 19:26pm
मङ्गलबार ५ माघ, २०७२
काठमाडौं— नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा एउटा उल्लेखनीय सफलता दिलाउन मंगलबार एक युवा खेलाडीको मुख्य योगदान रह्यो। बंगलादेशमा भइरहेको बङ्गबन्धु गोल्डकपको सेमिफाइनलमा उनै नवयुग श्रेष्ठको ह्याट्रिक मद्दतले नेपालले माल्दिभ्सलाई ४—१ ले हराउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्न सक्यो।
यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरेका उनले अहिलेसम्म नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट ७ वटा खेल मात्र खेलेका छन्। २५ वर्षे यी युवाले यसै वर्ष भारतसँग भएको खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरेका थिए।
विङ्गर र फरवार्डको रुपमा तीब्र गति र आक्रमक शैलीमा खेल्ने उनी विपक्षीहरुका लागि सधैँ खतरनाक मानिन्छन्।
यसअघि श्रीलंकालाई हराउँदा पनि नवयुगले प्रहार गरेको बल गोल पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो। पाेस्टबाट फर्किएको बललाई विमल घर्तीमगरले प्रहार गर्दा त्याे गोलमा परिणत भएको थियो।
त्रिभुवन आर्मी क्लब फुटबल टोलीका सदस्य उनी क्लबका लागि फरवार्डको रुपमै खेल्ने गर्छन्।
माल्दिभ्सलाई ४-१ ले हराउँदै नेपाल फाइनलमा
कृष्ण ढुंगानाLatest from
भैरवनाथ गण प्रकरण : पूर्वराजा, ओली र देउवाविरुद्ध कारवाही माग
हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)
ओली–दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल
दिल्ली गएर नेपालको सरकार फेरिँदैनः सुजाता कोइराला
खनाल-नेपाललाई ओलीको जवाफ : काम गर्न अर्को कार्यकाल चाहिने?